Akhriso: Muqtaar Rooboow Oo Dowladda Isku Dhiibay – Radio Danan (DBN) 94 FM
Nagala soo xiriir Email iyo Taleefankan
Warar • Wararka
Akhriso: Muqtaar Rooboow Oo Dowladda Isku Dhiibay
RADIO DANAN: Sida aynu ku heleyno warar lagu kalsoonyahay oo soo gaaraya warqabadka Idaacadda Danan ayaa sheegaya in wadaadka lagu magacaabo muqtaar Rooboow Abuu Mansuur uu isku soo dhiibay Diwladda federaalka soomaaliya.
Muqtaar rooboow ayaa horey uga tirsanaa dagaalyanada Alshabaab waxa uuna go’ansaday in uu isaga haro fikradooda wixii intaa ka danbeeyana heshiis uu la galay doadda Mareykanka ayaa looga saaray liiskii argagaxisada dowladda Mareykanka.
Wixii intaa ka danbeeyay waxa uu ku noolaa meel tuula ah oo ka tirsan gobolka Bakool halkaas oo ay kusoo weerareen Xarakada Alshabaab maalmo kahor.
Shalay ayuu gurmad ka helay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana xigtay wararka hadda soo dhacaya ee sheegaya in uu isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya.
Wixii ku soo kordha kala soco Radiodanan.net.
Audio • Warar • Wararka
Dhageyso:21 Oktobar waa Maalin Ceen kee ah (Warbixin)
Konton iyo seddex laga dilay ciidamada Masar
Kulankii Madaxweyne Farjaamo uu ku hortagi lahaa Labada Aqal ee Baarlamaanka oo baaqday
Qarixii Soobe: “Laba maalmood ayaa burburka ku hoos jiray”
R/Wasaaraha Soomaaliya oo Dowlada Imaraadka Carabta ka la hadlay arrimo quseeya Dalka
Audio • Qormooyin • Warar • Wararka
Dhageyso:Soomaalaay kaca , kuligiin kacoo iskaashada, kaftan dhamaaye (Warbixin)
KENYA: Uhuru Oo Gacan Saar La Yeelanaya Raila
Sacuudiga Oo Lagu Eedeeyay In Ay Xiriir La Leedahay Argagaxisada
Nalagala soco Barteena Facebook
dhaqanka iyo hidaha
Copyright © 2016. Radio DANAN - Designed by Alif Technology